धुलिखेलको चंखुबेसी-नयाँबस्तीः जहाँका स्थानीय सांसद लक्ष्मण लम्सालको गुण बिर्सन चाहादैँनन् (भिडिओ) – मिलिजुली खबर
धुलिखेलको चंखुबेसी-नयाँबस्तीः जहाँका स्थानीय सांसद लक्ष्मण लम्सालको गुण बिर्सन चाहादैँनन् (भिडिओ)
धुलिखेलको सबैभन्दा पुरानो हिमालयन होराईजन होटल मात्रै होईन अहिले नयाँ खुलेको होटल हिमालय दृश्यबाट देखिने तल तिर भिरालो जमिनमा अटेका बस्ती ।
स–साना बारीको पाटा । त्यसैमा अडेका छन् घर । बस्तीमा गाउँ र सहरीया घरको समिश्रण छ । कयौँलाई लाग्दो हो । अरनिको हाईवेसंगै जोडिएको गाउँ आहा !
तर यहाँका स्थानीयले भोग्दै आएको दुःख चानाचुने छैन् । मुलुकको नयाँ संरचना हुनुभन्दा अघि पनि यो बस्ती धुलिखेल नगरपालिकामै थियो । त्यो बेला वडा नम्बर ६ मा पथ्र्यो । अहिले वडा नम्बर ३ मा पर्छ ।
वडा नम्बर ३ को ‘चंखुबेसी–नयाँ बस्ती’ । सदरमुकाम सहितको धुलिखेल नगरपालिकाको कार्यालयबाट कम्तिमा १ किलोमिटर दुरीमा भेटिन्छ यो गाउँ । नयाँ बस्तीका गोविन्द प्रसाद घिमिरे उमेरले ७६ बर्ष पुग्नुभयो । दुई बर्ष जतिमात्रै भयो घिमिरेको आँगनसम्मै मोटर पुगेको । घिमिरेको मानसपटलमा ताजै छ । गाउँमा बाटो चाहिँयो भन्दै नगरपालिका धाउँदाका ति दिन ।
‘हाम्रो गाउँमा पनि सडक चाहियो भनेर रामशरण सापकोटा र म धेरै पटक नगरपालिकामा धायौ । सडकको लागि धेरै संघर्ष गर्यौ । धुलिखेलका मान्छेले अनावश्यक रुपमा बाटो किन चाहियो ? भने । हामी निरिह जस्तै भयौ । पहिला सडक नहुँदा किनेको गाई नोल लखाएर काँधमा बोकेर घरमा ल्याएर पालेको आजै जस्तै लाग्छ । अहिले आँगनमै सडक आईपुगेको छ । पहिला धुलिखेलका मान्छेले गरेको ब्यवहारले त यतिको सडक बन्छ भन्ने लागेको थिएन । सासंद लक्ष्मण लम्सालले ठूलो सहयोग गर्नुभएको छ । घिमिरेले भन्नुभयो ।’
अहिले ‘चंखुबेसी–नयाँबस्ती’ हुँदै पाँचखाल छिचोलिएको यो सडक खन्दा पनि एउटा संयोग छ । २०७५ साल फागुन १४ गते स्थानीय सुदर्शन बस्नेतको छोराको ब्रतबन्ध थियो । बस्नेतले संविधानसभा सदस्य बिदुर सापकोटा, संघीय सासंद गोकुल बाँस्कोटा, प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्साल र धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठलाई निम्तो दिनुभयो । निम्तो स्वीकार्दै प्रदेश सांसद लम्सालमात्रै सुदर्शनको घर पुग्नुभयो ।
गाउँका प्राय जसो निम्तो मान्न सुर्दशनकै घरमा भेला थिए । सबैले बाटोको अवस्था सासंद लम्साललाई जानकारी गराए । सडक नहुँदा खेपिरसेको दुःख सुनाए । सासंद लम्साल आफैले पनि त्यो बस्तीका नागरिकको दुःख प्रत्यक्ष देख्नुभयो ।
‘सासंद लम्सालले हुन्छ त भन्नुभयो । चिन्ता थियो फेरी अरू नेताले जस्तै जनताको अगाडि मात्रै हुन्छ भन्नुभयो की भन्ने । तर त्यहि बर्ष २५ लाख विनियोजन गरिदिनु भएछ हाम्रो टोलको सडकको लागि । अनि सासंद लम्साल प्रति थप विश्वास जाग्यो । सुदर्शन बस्नेतले मिलिजुली खबरसंग भन्नुभयो ।’
सडक ग्रामीण विकासको पहिलो आधार हो । अहिले ‘चंखुबेसी–नयाँबस्ती’ का नागरिकलाई दैनिक आउजाउ गर्न सजिलो मात्रै भएको छैन् । खेतीपाती लगाउन पनि ज्यादै सहज भएको छ । ‘ओहो ! त्यो बेलाको र अहिलेको कुरा गरेर के साध्य । यो बेसीबाट धान, आलु बोकेरै उकालो जानु पथ्र्यो । धेरै दुःख गरियो । खेतमा धान भित्र्याउदै गर्नु भएका वडा नम्बर ८ का राम शरण शाहले भन्नुभयो ‘सडक आएपछि धैरै सजिलो भएको छ । मल पनि बोकेर ल्याउनु पर्दैन् । खेतबाट बाली पनि बोकेर जानु पर्दैन् । सबै गाडीले ओसारपसार गर्छन् ।’
सासंद लम्सालले रकम विनियोजन गरेर सडक निर्माण भएपछि ‘चंखुबेसी—नयाँबस्ती’ ले काँच्ली फेरेको भनाई छ, छविलाल घिमिरेको । ‘अहिले जहाँ मेरो घर छ । त्यहाँ पुरै नयाँ सडक खनिएको हो । एक पटक गाउँमा सासंद लम्साल आउनुभएको थियो । म धेरै कुरा भन्दा पनि सकेसम्मको काम गर्नु भनेर जानुभएको थियो । न भन्दै अहिले यतिसम्म त उहाँकै प्रयासमा भएको हो । अब पिच पनि उहाँकै पालामा भैदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा गरेको छ । घिमिरेले भन्नुभयो ।’
‘चंखुबेसी-नयाँबस्ती’ का धेरै जसो खेतका धन किसानले भित्र्याईसकेका छन् । अब आलु खेती सुरू हुन्छ । ‘पहिले खेत बारीमा फलाइएका चिजबिच बिक्री गर्नु पर्यो भने भारी भोकेरै यहि उकालो बजार पुर्याउनु पथ्र्यो । मैले पनि धेरै पटक यो उकालो थाप्लोमा नाम्लो राखेर भारी बोकेको छु । यो बिच भागसम्म त सडक थियो । तर गाडी आउनै सक्दैन थियो । नाममात्रैको सडक । तर सासंद लक्ष्मण लम्सालले बजेट पारिदिएपछि ती भारी भोकेर बजार जाने दुःख कष्ट दूर भएको छ । स्थानीय राजु घिमिरेले भन्नुभयो ।’
गाउँमा सडकले नयाँ आयाम थपिदिएको छ । किसानको मुहारमा उज्यालो थपिदिएको छ । स्कुल जाने केटाकेटी र बृद्धबृद्धालाई पनि हिडडुल गर्न निकै सजिलो भएको छ । ‘म नढाँटि भन्छु । काम गर्ने मान्छेको योगदानलाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । सासंद लक्ष्मणले यो ठाँका लागि हामीले सोचेभन्दा बढी नै दिनु भएको छ । कहाँ हिजोको कष्टकर जीवन, कहाँ अहिले आँगनमै गाडी । खुशीको कुनै सिमा नै छैन् । सदरमुकाम नजिक भएरपनि हामी सडक अभावमा तड्पि रहेको थियौँ । सडक नहुँदा अन्य विकास निर्मामा पनि धेरै पछि परेका थियौ । तर अहिले सहज भएको छ । यसको श्रय सासंद लक्ष्मण लम्साललाई दिन कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । उहाँको यो योगदानलाई पछिल्लो पुस्ताले पनि सम्झिरहनेछ । राजु घिमिरेले भन्नुभयो ।’
सासंद लम्सालको पहल र प्रयासमा विनियोजन गरिएको बजेटबाट धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर ३ को नयाँबस्तीबाट धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर २ को कोटाभिरसम्म ५ किलोमिटर नयाँ ट्याक खुलेको छ ।
६ किलो मिटर ग्राबेलिङ गरिएको छ । साढे ३ किलो मिटर सडक चौडा गरिएको छ । सात मिटर चौडाईको यो सडकको लागि बागमती प्रदेशका सांसद लक्ष्मण लम्साल मार्फत हालसम्म प्राप्त ७५ लाख रूपैयाँको काम भैसकेको छ ।
थप साढे १ करोड प्रदेश सरकार र धुलिखेल नगरपालिकाको साढे १ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको यो सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । यो बजेट भने टेण्डर मार्फत खर्च हुनेछ । यो सकडकले धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर २ रविओपीको किसानलाई पनि औदी सजिलो भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको इचोकमा यात्रु बहाक बस दुर्घटना
काभ्रे कांग्रेसमा शिव हुमागाई र तीर्थ लामा समूहमा गम्भिर फाटोे, लागे आ–आफ्नो बाटो